अन्ततः भुटान पनि भारतसँग रुष्ट ! भुटानले पानी रोकेपछि भारतमा हाहाकार - News20 Media
June 26, 2020 June 26, 2020 N20LeaveaComment on अन्ततः भुटान पनि भारतसँग रुष्ट ! भुटानले पानी रोकेपछि भारतमा हाहाकार
काठमाडौँ । भुटानले भारतलाई पानी नदिने भएको छ । भारतलाई सिचाईंका लागि दिँदै आएको पानी अब भुटानले रोक्ने भएको हो । भारतको आसामलाई सिचाईं गर्न भुटाबाट पानी ल्याउने गरिएको थियो । अब भुटानले पानी भारतलाई नदिने निर्णय भारतीय संचार माध्यम टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ ।
भारतीय किसानहरुले सन् १९५३ देखि उक्त सिचाईं च्यानलको प्रयोग गर्दै आएका थिए । भुटान सरकारको यस्तो निर्णयले आसामका २५ गाउँका किसानहरु प्रभावित हुने बताइएको छ । भुटान सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण कम गर्न विदेशीहरूलाई प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
त्यसै क्रममा भारतीय किसानहरु पनि खेतमा पानी ल्याउन भुटान प्रवेश गर्नुपर्ने हुँदा कोरोना संक्रमण हुने भन्दै उक्त निर्णय लिएको हो । तर, हिन्दूस्तान टाइम्सले भने भुटानले भारतलाई पानी नदिने निर्णय नगरेको जनाएको छ । प्राकृतिक रुपमा नदी थुनिएकाले पानी भारतमा आउन समस्या परेको सो मिडियाले जनाएको छ ।
मैले १७ हजार मा’रेको सत्य होइन, पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु : प्रचण्ड